Laptọọpụ dị ka nha ihuenyo si dị: 13 ", 14", 15 "na 17" kacha mma
Laptọọpụ dị ka nha ihuenyo si dị
Ụzọ ọzọ ị ga-esi họrọ laptọọpụ bụ dị ka ihuenyo nha. Ihe nzacha a na-enye gị ohere ịnwe ndepụta kọmpụta nwere nha ihuenyo akọwapụtara nke ọma, yana enwere ike inyocha na iji kọmputa ndị ahụ dabara nke ọma maka ihe ịchọrọ.
Cheta na ihuenyo Ọ bụghị naanị ajụjụ nke elu a na-ahụ anya, Ọ na-egosikwa ọtụtụ uru na ọghọm ndị ọzọ, na-emetụta ngagharị, nnwere onwe, ihe bara uru, wdg.
Laptọọpụ nwere ihuenyo 13 ” nwere uru abụọ dị mkpa. Otu n'ime ha bụ obere nha ya, na-enweghị oke dị ka ụfọdụ nkeji 10 ma ọ bụ 11, mana kọmpat zuru oke iji meziwanye ọtụtụ. ibu na akụkụ nke otu ndị a. Ya mere, ha ga-adị mma maka ndị chọrọ ịga njem dị ukwuu ma buru ngwá ọrụ ha n'azụ.
The ọzọ oké uru nke a ihuenyo nwekwara na-eme na ngagharị, kpọmkwem na nnwere onwe. Ma ọ bụ na, ụdị obere ogwe ndị a, na-enye ohere ịchekwa batrị. Site n'inweghi elu nke na-arụ ọrụ ka ọkụ, batrị ga-agbatị ndụ ya ntakịrị.
Si buscas ihe dị n'etiti N'etiti agagharị na nnwere onwe nke 13 sentimita asatọ, na nha buru ibu karịa 15 ", mgbe ahụ usoro a nwere ike ịbụ nke kachasị mma. Oriri agaghị adị elu n'ụdị panel a, n'aka nke ọzọ, inwe otu inch ọzọ (2.54 cm diagonal), ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ntakịrị elu ọrụ.
N'aka nke ọzọ, ibu panel pụtakwara ibu akụrụngwa elu. Ya bụ, ohere ka mma maka oyi ma ọ bụ spacing nke akụrụngwa, yana ohere iji bulie batrị dịtụ elu nke na-akwụ ụgwọ maka oriri dị elu a.
Nke 15 "bụ kacha na-emekarị size mgbe a bịara na laptọọpụ. Ọtụtụ n'ime ya na-abụkarị nha a. Ma nke a bụ ikpe ebe ọ nwere ike ịbụ ihe ọzọ kachasị mma na kọmputa desktọpụ, yana ebe ọrụ dị mma dị, n'agbanyeghị na ha ga-adị arọ karị ma jiri ntakịrị ihe oriri.
Ha bụ nhọrọ zuru oke maka ọtụtụ. Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ nke nha ịhọrọ Ma ahọrọla maka nke ọ bụla, ịhọrọ inch 15 nwere ike ikwe nkwa na ị bụghị ihe ọjọọ na pasent kachasị elu. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ na eserese, ịkwesịrị imeghe ọtụtụ windo, ma ọ bụ ịchọrọ igwu egwu, ọ bụ nhọrọ dị mma ma e jiri ya tụnyere obere ogwe.
Maka ndị ọrụ chọrọ ihe ka ukwuu, laptọọpụ 17-inch bụ ihe ha na-achọ. Ọ nwere ike ịbụ ezigbo panel size maka ndị egwuregwu, ndị na-ese ihe osise, ndị editọ 3D, maka ndị ga-agụ akwụkwọ na ihuenyo (ọ ga-egbochi gị ime ka anya gị dị ukwuu), ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu anya, wdg.
Na ọnụ ahịa nke nha ahụ, ihuenyo ndị a belata ngagharị nke laptọọpụ, nwere akụkụ buru ibu, ibu dị arọ, yana ike dị elu. N'ụzọ megidere nke ahụ, nnwere onwe anaghị adịkarị iche, ebe ọ bụ na ihe na-efunahụ n'ihi oriri nke ogwe ndị a na-enweta site n'inwe ike ịwụnye batrị nwere ikike dị elu ...
Ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ laptọọpụ 17-inch, n'isiokwu a, ị ga-ahụ ihe kacha mma na ahịa.
Ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ laptọọpụ inch 13 na ntụnyere emelitere a, ị ga-ama nke kacha mma maka ego.
Ị na-achọ laptọọpụ inch 14? Chọpụta ụdị ọnụahịa kacha mma nwere nha ihuenyo a. Kedu ihe kacha atụkwasị obi?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta laptọọpụ inch 15 na ntụnyere a, ị ga-ahụ ụdị kachasị mma nke ga-enyere gị aka ịhọrọ. Ị nwere obi abụọ? Dozie ha ebe a